गीत सुनाउँदै बिरामी जाँच्छु – PathivaraOnline
Home > समाचार > गीत सुनाउँदै बिरामी जाँच्छु
admin December 28, 2018 समाचार	0
नेपाल आइडल सिजन टुको उत्कृष्ट १० मा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरे, पोखराकी नीलिमा थापा र झापाकी अस्मिता अधिकारीले। गत वर्ष प्रमिला राई, सन्ध्या जोशी, सुजाता पाण्डे र केन्जल श्रेष्ठ गरी चारजना उत्कृष्ट १० मा थिए। महिलालाई सिंगिङ रियालिटी सोमा अगाडि बढ्न कत्तिको अप्ठ्यारो छ ? संगीतमा महिलाको संख्या किन कम छ ?पेसाले नर्स नेपाल आइडल सिजन टुकी थर्ड रनरअप अस्मिता अधिकारीसँग अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानी :
नेपाल आइडलमा तपाईंको यात्रा कसरी सुरु भयो ?
म सानैदेखि गीत गाउन रुचाउँथेँ। बीएस्सी नर्सिङ सकाएर यसै बसेको बेला नेपाल आइडलको फर्म खुल्यो। फर्म भरेँ, गीत गाएँ, जजहरूको राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ।
उत्कृष्ट चारको यात्रामा पर्ने सोच्नुभएको थियो ?
रिजल्टभन्दा पनि संगीत सिक्न भनी म आइडलमा आएकी थिए। यहाँसम्म आउँछु भन्ने थिएन। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। देशविदेशमा मेरो स्वर मन पराउने फ्यानहरू भेटेकी छु। मेरो परिचय फेरिएको छ। परिवारले पनि निकै सहयोग गरे।
रियालिटी सोहरूमा महिलाको उपस्थिति किन कम ?
महिलाहरू खुलेर संगीतमा आउने वातावरण अझै बनिसकेको छैन। गीत गाउनु, रियाज गर्नु र यसका प्राविधिक कुराहरू सिक्नु अत्यन्तै कठिन काम हो। कति क्षमता भएका साथीहरूलाई त यो क्षेत्रमा आउनै गाह्रो छ। धेरै महिला त आफ्नो चाहना मारेर बस्न बाध्य छन्। स्वर राम्रो भए पनि कतिपय महिलाको संगीतप्रति लगाव छैन। पहिलो कुरा त आफूभित्रै नै चाहना हुनुपर्‍यो, संगीतप्रति लगाव हुनुपर्‍यो।
चौथो स्थानसम्मको सिँढी उक्लिन तपाईंले के कस्तो संघर्ष गर्नु पर्‍यो ?
करिब आठ÷नौ महिनाको समय त मैले आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी सबै बिर्सिएँ। रातदिन रियाजमा खटिएँ। आफ्नो प्रस्तुति कसरी फरक र उत्कृष्ट बनाउने भनेरै हरपल सोच्ने गर्थें। आफूमा के कमजोरी छ, त्यो हटाउनेतिर लागेँ। बाल्यकालदेखि नै म भजन गाउँथेँ। गाउँघरमा धेरैको प्रशंसा पनि पाएकी छु, भजन गाएर। म निकै डुब्छु संगीतमा।
इन्डियन आइडल, नेपाल आइडल, भ्वाइस आफ नेपाल लगायतका रियालिटी सोको टाइटल विजेता प्रायः पुरुषहरू नै देखिन्छन् नि ?
पुरुष भएकाले विजेता बनेभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा महिला गायिकाहरूले भन्दा राम्रो गाएर विजेता बनेका हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा महिलाको क्षमतामा विश्वास गर्ने, अगाडि बढ्न उनीहरूलाई सहयोग गर्ने समाज अझै बनिसकेको छैन।
महिलाले पनि सांगीतिक क्षेत्रमा निकै राम्रो गरिरहेका छन्। टाइटल विजेता चुन्ने अधिकार त जजलाई भन्दा पनि दर्शकलाई नै बढी थियो। दर्शकको रोजाइमा पुरुष परे।
अब प्राथमिकतामा नर्सिङ कि गायन ?
पढाइ नर्सिङ तर रहर गीत गाउने दुवै फरक विधा हुन्। तर, अप्ठ्यारो लागेको छैन मलाई। दुवै कामलाई सँगसँगै लैजाने योजना छ। सेवाका लागि नर्सिङ र रुचिको विषय गायन। गीत सुनाउँदै बिरामीको उपचार गर्छु।
Handicapped Man Painting In The Road Side for his Life! – Video
दाई करोडपति भाई मन्दिरको पेटीमा। दाई भाउजु सधैं त्यहि मन्दिरमा पुजा गर्न आउँछन्(भिडियो सहित)
सिधै यस्तो भन्छन्ः ‘हामीलाई सिडियोले त केहि गर्दैनन्, भिडियो खिच्ने तपाई को हो?’ (भिडियो हेर्नुस्)